Iindaba -Iiprofayili ze-aluminium ezenziwe ngokwesiko kufuneka zibeke emngciphekweni
1. Ngaba kunyanzelekile ukuba yenziwe ngokwezifiso?
Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso iprofayili yealuminium kwisakhelo sangaphandle sezixhobo, kuyacetyiswa ukuba ungazenzi ngokwezifiso, kuba iprofayili yesiqhelo yealuminium yiprofayili ekumgangatho ophezulu yealuminium, kwaye zininzi iinkcukacha, ezinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno yesakhelo. Kwaye uluhlu olupheleleyo lwezincedisi, iindlela ezahlukeneyo zonxibelelwano onokukhetha kuzo. Abanye abantu banokuthi isakhelo sam sangaphandle asingonxande kodwa siyi-polygonal, ngelixa icandelo ngokubanzi le-aluminium yoshishino liyixande okanye isikwere. Ndiyathetha ngokufanelekileyo ukuba akukho ngxaki, ukuba nje umgca wokutsala, akukho ndibano yoxinzelelo, indawo yethu yokubonisa yealuminium iikhabhathi zokubonisa ezinamacala amabini zakhiwe ngeeprofayili zealuminium zeshishini.
2. Ukujiya kwealuminium, kubangcono?
Ukuba kufuneka wenze ngokwezifiso iprofayili, akubizi ukuyenza ngokwezifiso. Iindleko zokuvula zokufa kweeprofayili zealuminium zitshiphu xa zithelekiswa nezinye izinto zokubumba. Ezinye iiprofayili zesiko lealuminium kufuneka zidlale indima ethile, ke xa uyilo loyilo lujiyile ngokukodwa, ukuze kufezekiswe umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo. Kodwa ndifuna ukuthi ubukhulu bodonga abukho ukutyeba ngcono, kwelinye icala, ukujiya kwexabiso lodonga kuphezulu, ixabiso lealuminiyam ngokwalo liphezulu, nto leyo inyusa kakhulu iindleko; Kwelinye icala, ukujiya kodonga, kokukhona ubunzima busezantsi. Njengephrofayili ye-aluminium engama-6063 esihlala sisenza, ubunzima bokuqina yi-8-12HW. Ukuba ubukhulu bodonga bukhulu kakhulu, ubunzima bunokufikelela kuphela kwi-8HW. Umzekelo, ubukhulu bodonga kwiprofayili yethu eqhelekileyo yealuminium ye-2mm kuphela, kodwa uyilo lwayo lusengqiqweni kakhulu, olunokuhlangabezana neemfuno eziphezulu zokuthwala umthwalo.
3. Ungazidibanisa ezi profayile zimbini?
Abanye abathengi bafuna ukugcina ezinye iindleko zesikhunta okanye babe nezinye izimvo, kukho iintlobo ezininzi zeeprofayili ze-aluminium ezenziwe ngokwezifiso, kufuneka zisebenzise ukudibanisa iiprofayili ezininzi ze-aluminium, abaqulunqi beenkampani zabathengi baya kudibanisa iimbumba ezimbini kwi-mold, cinga ukuba oku kungagcina izinto ezininzi. Ngokwenyani, bendizakuthi izakulibazisa izinto. Sakha saba nomthengi osebenza ngale ndlela. Bekufanele ukuba sivule iiseti ezimbini zokubumba, enye inodonga olucekeceke kakhulu kwaye enye inodonga olungqindilili. Emva kwexesha, nditshintshe uyilo loyilo ndaza ndadibanisa ukungunda kokubini, kukhokelela ekubunjweni okusondeleyo. Ndizamile ukutshintsha isikhunta ndatshintsha ukungunda. Emva kwamaxesha N olingo, ukungunda bekufanelekile. Ngenxa yokuba ubukhulu bodonga bukhulu kakhulu, kunzima kakhulu ukuvelisa.
4. Ngubani ophethe ifom ye-aluminium eyenziwe ngokwezifiso?
Iiprofayili ze-aluminium ezenziwe ngokwezifiso zifuna ukubunjwa, kwaye umrhumo wokuvula umngundo uhlala uhlawulwa ngumthengi (unokubuyiselwa imali ukuba ivolumu yokuthenga yonyaka ifikelela kwiitoni ezithile). Ke ubunini besikhunta kufuneka sibe ngumthengi, oku ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa isikhunta ngokubanzi asithathwa ngabathengi, kodwa sigcinwe kumenzi. Kuba iiprofayili ze-aluminium ezenziwe ngokwezifiso azifane zi-odolwe kube kanye, akukho nto isetyenziswayo kubaxumi abagodukayo. Umenzi unendawo yokugcina izinto zokubumba ukugcina ukungunda, kwaye ukungunda ngumgangatho wentsimbi we-H13, akukho lula ukonakalisa. Ngezizathu ezithile ezizodwa, abanye abathengi bangathanda ukuthatha ukubuya babuyisele komnye umzi mveliso. Ndikucebisa ukuba ungazami ukwenza le kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna ukuyenza phi ngaphambi kokuba uvule ukungunda. Ngenxa yokuba bonke abavelisi be-aluminium extruder abafani, iphedi yokufa, iinkcukacha zokugubungela ukufa nazo zahlukile. Sidibene nabathengi abaninzi abafuna ukuthatha ukubumba kwabo bakuse kwimveliso yethu, kodwa ngentlonelo sibenqabile.
Oku kungasentla yile nto ndifuna ukuyazisa, ndiyathemba ukuba inokukunceda.